ukubukeka lalo muzi akuxhomekile nje kuphela esimweni ukuhlela efanele izindawo zokuhlala kanye nokuthuthukiswa kwabo okunengqondo, kodwa futhi zendlela itholakala ezakhiweni zomphakathi, njengoba ukhululekile, ukusebenza kanye ubukeka emuhle. Yiziphi lezi zakhiwo, ukudizayina kahle, indlela ukusebenzisa izindawo ephelelwe yisikhathi - konke odinga ukukwazi umklamo ibhizinisi ochwepheshe ukwakha izakhiwo zesimanje ngempela, nenhle futhi ngesikhathi esifanayo okusetshenziswa abantu.
Ukwahlukanisa nezakhiwo zomphakathi
Umsebenzi oyinhloko lezi zakhiwo - ukuhlinzeka kalula nenduduzo izakhamuzi emadolobheni nasemadolobhaneni ukuhlangabezana zonke izidingo. Kungenziwa wabahlukanisa ngezigaba njengamadodana obusebenzayo, ukuyothenga kanye zamasiko. izakhiwo zomphakathi yilezi ezilandelayo:
zezempilo, ezemidlalo kanye ukuqeqeshwa ngokomzimba. Lena ngokuyinhloko izibhedlela nezinye izikhungo zezempilo ezikhethekile, izikhungo zezempilo, amakhaya lonke, boarding izindlu. Futhi kulesi sigaba yilezi ezihlukahlukene ezinkundleni zemidlalo ezemidlalo ukuqeqeshwa izikhungo, ezemidlalo izigodlo, njll
izikhungo yezesayensi zemfundo (izikole, izinkulisa, amanyuvesi, ucwaningo nezikhungo).
Trade izakhiwo zomphakathi nezinye izindawo. A ezihlukahlukene ezitolo, izitolo, izimakethe ezimboziwe izakhiwo efanayo.
zamasiko: iminyuziyamu yeshashalazi nezindawo zokubukela amabhayisikobho, amahholo embukisweni, izigodlo isiko, njll
Amahhotela kanye amamotheli, emahostela, zokudlala, njll
WezokuThutha izakhiwo zomphakathi - ibhasi ujantshi iziteshi, izikhumulo zezindiza kanye iziteshi emfuleni.
izinkampani Ukwakhiwa, design izikhungo.
Yakhelwe ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zezimali - amabhange, amabhange imali, izinkampani zomshuwalense.
Uhlu kungenziwa wanezela noma yinde, lolu hlu ikude ephelele. izakhiwo ezinjalo kufanele yakhelwe ngokucophelela futhi ngamabomu, ngoba ezikhathini eziningi sikhuluma izakhiwo ukuthi njalo sihamba ekusakazeni womuntu, futhi nezidingo ukuphepha kanye okunengqondo inhlangano isikhala kuphezulu kakhulu.
Ukwakhiwa izakhiwo zesimanje yomphakathi - imibono kwakwakhiwa kakhulu futhi ezithakazelisayo
Okokuqala kumelwe banamathela izincomo, ezakhiwe izakhiwo zomphakathi - SNIP (wokwakha amakhodi) ezakhiwa ochwepheshe. Abasakwazi esiqinile futhi elinganiselwe, ngakho safike esetshenziswa izixazululo zabo ejwayelekile yezakhiwo kanye ukubukeka elula.
Kodwa ubuchwepheshe besimanje akusho yima, emkhakheni ukwakhiwa kanye izakhiwo kuyinto ukuthuthukiswa esebenzayo yokuthuthukisa amaphrojekti amatjha ezithakazelisayo, hhayi kuphela ukusebenza, kodwa futhi engavamile futhi umxhwele. Njengoba sazi ukuthi bahloniphe imithetho ngokuqinile kakhulu ezidingekayo, kuba lokusungula kutshengisa buchopho. Abakhi Ngasekuqaleni kwaleli khulu leminyaka - laba baculi abanamakhono.
Amaphrojekthi ethandwa kakhulu futhi original ukuthi Kwakhiwa, izakhiwo zesimanje zomphakathi zibandakanya izinhlobo engavamile lathumela, isixazululo yokudala isikhala elingaphakathi, kanye nobungane kwemvelo nokuphepha. "Green" izindlu, izinkundla semi isiyingi, bobunjwa crazy amathiyetha iminyuziyamu - ukubukeka emadolobheni uya ushintsha, kumangaza futhi ujabula izakhamuzi zakhona.
Ukwakheka ukhonkolo isisekelo
Ukwakhiwa Unfinished: umqondo jikelele kanye nezici sokubhalisa
Nokufaka - Iyini? izinhlobo valve
Ngubani Zahariya Smit?
Ukuhlaziywa senkondlo. "Ingxoxo nembongi umdayisi wezincwadi wangaleso"
Izinhlobo ezokuvakasha - iyiphi ukukhetha for a holiday
Indlela ukuqopha umdlalo ku-Xbox 360: Imiyalelo Wabasaqalayo
Umsebenzi zokwelapha e osteochondrosis
Evgeny Shishkin Biography futhi lokusungula
Isikimu ukuhlaziywa lyric inkondlo. Isikimu inkondlo ukuhlaziywa